सन्तोषजनक सुरुआत गर्न नसकेका रोनाल्डो र स्वारेज बन्लान ‘एल क्लासिको’ स्टार ? | Hamro Khelkud
सन्तोषजनक सुरुआत गर्न नसकेका रोनाल्डो र स्वारेज बन्लान ‘एल क्लासिको’ स्टार ?
म्याड्रिड (एजेन्सी) – फुटबल समर्थक माझ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ‘एल क्लासिका’ राम्रो उपहार हो । यहि डिसेम्बर २३ मा रियल म्याड्रिडको घरेलु मैदानमा स्पेनिस लिगका दुई महारथी भिड्दै छन् । यो खेल रियल र बार्सिलोना दुवैको लागि २०१७ को अन्तिम खेल हुनेछ । तसर्थ वर्षको सुखद अन्त्यको निम्ति दुवै टोली जितको प्रयत्नमा रहनेछन् ।
अंक तालिकामा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ , दोस्रो स्थानमा रहेको एट्लेटिको म्याड्रिड भन्दा ६ अंक माथि त । रियल भने सिजनको सुरुआतको त्रुटिहरु सुधार्दै चौथो स्थानमा छ । बार्सिलोना भन्दा टोली अझै ११ अंकले पछि छ । त्यसैले रियलले यो खेललाई जित्नै पर्ने दबाबका साथ खेल्नेछ । रियलको जितका लागि टोलीका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चल्नु पर्ने छ ।
अघिल्लो सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बालोन डी ओर जितेका रोनाल्डोको यो सिजन भने प्रदर्शन सोचे अनुरुप छैन । लिगको पहिलो ८ खेलमा १ गोल मात्र गर्न सफल रोनाल्डोले सिजनको सुरुआत देखि आलोचना खप्नु परेको थियो । तर सबै प्रतियोगितामा हेर्दा पछिल्ला ७ खेलमा ८ गोल गरेका छन् । उनैको निर्णायक गोलमा रियलले केहि दिनअघि क्लब विश्व कप जितेको थियो । त्यसैले उनले लय सामत्दै गर्नु बार्सिलोनाका लागि भने चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ।
त्यस्तै बार्सिलोनामा लुइस स्वारेजले पनि सिजनमा राम्रो सुरुआत गरेनन् । उरुग्वेली गोल मसिन को रुपमा हेरिएक स्वारेजले पछिल्लो खेलमा २ गोल गरे । उनको एक प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो भने अर्को प्रहार विवादास्पद रुपमा गोल नदिइदा उनी ह्याट्रिक गर्नबाट चुके । तर सकारात्मक रुपमा हेर्दा डिपोर्टिभो लाकु रोना सँगको जितमा २ गोल गरेका स्वारेजको आत्मविश्वास बढेको छ ।
विश्व भरका समर्थकको नजर रहने , फुटबलको सबै भन्दा प्रसिद्ध मानिएको युद्धमा यी दुवै खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गर्दै आलोचनालाई गलत ठम्याउले मौका पाउनेछन् । असन्तोषजनक सुरुआत गरेका रोनाल्डो र स्वारेज बन्लान एल क्लासिकोका स्टार ? यो प्रश्नको उत्तर भने समयले दिनेछ ।